एन्टीबडी नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री ओली सिंगापुर प्रस्थान - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ एन्टीबडी नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री ओली सिंगापुर प्रस्थान
एन्टीबडी नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री ओली सिंगापुर प्रस्थान
हेल्थ आवाज बिहीबार, २०७६ भदौ ५ गते, १४:१७ मा प्रकाशित
काठमाडौं–मिगौलामा एन्टीबडीको मात्रा धेरै देखिएपछि त्यसको उपचार गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आज सिंगापुर प्रस्थान गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली बिहीबार दिउसो साढे १ बजे थाई एयरबाट सिंगापुर प्रस्थान गरेका हुन् । ओलीसँगै उनकी पत्नी राधिका शाक्य, प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक पनि सिंगापुर प्रस्थान गरेका छन् ।
ओलीको मिर्गौलासम्बन्धी एन्टीबडीको मात्रा केही बढी देखिएको बताइएको थियो । एन्टीबडीलाई शरिरबाट निस्काशन गरि निराकरण गर्ने उपचार बिधिलाई निरन्तरता दिन उनी पुनः सिंगापुरतर्फ प्रस्थान गरेको ओलीका निजी चिकित्सक डा. दिव्या सिंहद्धारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । ‘सिंगापुर रहँदा नेसनल युनिर्भसिटी अस्पतालमा नै नेपाली चिकित्सकको साथमा त्यहाँका विज्ञ टोलीले ओलीको मिर्गौलाको थप परीक्षण गर्नेछन,’ डा. सिंहद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
साउन १८ गते सिंगापुर प्रस्थान गरेका प्रधानमन्त्री ओली ९ दिनको बसाइँपछि गत सोमबार स्वदेश फर्केका थिए । ओलीको सिंगापुरको नेसनल युनिभर्सिटी अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो । उनको सोही अस्पतालमा उनको उपचार हुने भएको छ ।